ukwakhiwa Ofanele base izonikeza umdlali e Clash of kwamaqembu ukuzivikela okunokwethenjelwa futhi bayokwenza anikwe ematfuba lamanyenti balwe. Bambalwa abadlali ezikhululekile ukwazi ukuthi, kuncike isitayela nemigomo umdlalo kudingeka ukwakha isizinda ezahlukene. Namuhla sikhuluma "Clash Of Clancy." Lapho umgwaqo i-base TX 4 - isihloko lesi sihloko.
Ngakho, uma Usanda kuthuthela ezingeni lesine ihholo ledolobha, kumelwe uqonde ukuthi phambi kwakho manje umsebenzi eyodwa kuphela - ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze kabusha ngcono izakhiwo ezindala futhi abasanda wadala. Khumbula ukuthi inani buildings umdlalo lilinganiselwe, ngakho uma ayatholakala nhlobo ngamakwata amathathu, bese uyibeke kumephu kubalulekile kubo bonke, kungakhathaliseki ukuthi singakanani oyisebenzisayo. Lezi zakhiwo hhayi kuphela ukusheshisa ukukhiqizwa amasosha, kodwa futhi ukudlala indima izakhiwo ezengeziwe zokuzivikela.
Njengoba TX 4 ukuqondanisa base igxile umsebenzi eyinhloko ekuqongeleleni imithombo, kuba uhlelo elula kakhulu ukuthi ungase ubone kancane ephakeme. Make ngaphandle kwehholo ledolobha kuyoba ilitshe okuphambili abahlaseli. Yebo, uzolahlekelwa izinkomishi (isilinganiso), kodwa ngeke ukwazi ukulondoloza, nokuvikela emafektri yakho.
Yini esinayo ukuphela? On the ingxenye abacibisheli ukuhlasela esiyingozi - izindonga double nezibhamu ngeke akuvumele uthole emafektri. Ohlangothini eningizimu-asempumalanga futhi ugcwele izakhiwo nezindonga, okuyinto alibale kakhulu isitha. Umkhuba ezisobala kakhulu buya ntshonalanga (ngenxa eHholo Town), kodwa sibonga ukubekwa afanele izikhali ukuzivikela, okungukuthi lapho ngobuningi bagxila firepower.
Uma umdlali uye zanqwabelana izinsiza ezanele futhi ngcono zonke izakhiwo, sekuyisikhathi ukuhlasela nabaphikisi futhi amazinga abahola ku TX 4. Ukubekwa isisekelo salokhu nqubo ethé ukuhluka kancane, kusukela umsebenzi oyinhloko kuyisivikelo sehholo ledolobha.
Isifanekiso kuboniswa, ungabona ukulinganisela okuhle kwezibhamu ukuzivikela. kwaqhuma symmetrically esilinganayo futhi abacibisheli ukunikeza ezinhle prostrelivaemost lonke database, okusho ukuthi kungakhathaliseki ukuthi isiqondiso zokuhlasela, kungalimaza kakhulu amabutho esitha.
Vula kwemibhoshongo emihubheni zivikelwe Izicupho cishe ngokuphazima kweso ingxenye ehlasela TX 4. Ukuhambisana base ikuvumela ukuba ugcine izinsiza lapho ayipheli imidlalo kanye kabusha izinsiza kusuka amabhomu agqitshiwe USB. Uma ungakwazi ukuqapha njalo isimo kwezimayini the game, ungakwazi ushintshashintsha nabo isitoreji, ngakho ungagcina izinsiza ukuthi baye likhishiwe. emafektri elingenalutho abazenzi ngesikhathi esifanayo futhi zinikwa umhlaseli.
kubalulekile ukubiza isikimu zakamuva: ". Ikhona yini enye indlela ukwenza" Ngo Clash of kwamaqembu ukubekwa TX 4 base kuyisinyathelo-ngokusebenzisa, kanti abadlali kuso ungahlali isikhathi eside. Ngakho-ke kubalulekile ukuqoqa izinsiza ngokushesha futhi siqhubeke.
Leli cebo kuboniswa kahle kanjani hhayi ukwakha TX 4. Ukuhambisana base kulokhu has eyodwa kusimo enkulu. Northeast ekhoneni Nokho, nakhiwe isakhiwo obunokuthula, kodwa kukhona cishe awekho umbhoshongo, futhi ngenxa yalokho, isitha buthule ukubhubhisa konke endleleni yayo nokuthi izofika hhayi kuphela ihholo ledolobha, kodwa ngaphambi pair of izitolo enkabeni.
'Skyrim': ikhono edume. Indlela yokwenza kuyikhono edume ngo "Skyrim"
Sublustrum: umdlalo idlula, ngesakhiwo
Njengoba ikhekhe acatshangelwe "Maynkraft"
Njengoba e "The Sims 2" ukuba babe uyathakatha? Imikhandlu abadlali ekuqaleni
Kanjani ukusakaza "Skype" umculo izinga ezinhle: ikhambi elula Wabasaqalayo